Onye na-eme ihe nkiri Derek Luke na Ihe Odide na Ihe doo anya na 'Nhichapụ' Oge nke abụọ
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Onye na-eme ihe nkiri Derek Luke na Ihe Odide na Ihe doo anya na 'Nhichapụ' Oge nke abụọ
edere ya Waylon Jordan December 18, 2019
Onye na-eme ihe nkiri Derek Luke nwere ezigbo ọrụ kemgbe mbụ ọ pụtara na ndị ọbịa na-arụ ọrụ na sitcoms dị ka Eze nke Queens na Moesha tupu ya breakout na-arụ ọrụ Antwone Fisher abụghị Denzel Washington na 2002.
Kemgbe ahụ, ọ pụtara n'ọtụtụ ọrụ na-agafe usoro ndị sitere na Madea Agaa Mkpọrọ na Captain America: The Mbụ ọbọ na Netflix si 13 mere. N'ime ihe ndị a niile, agbanyeghị na ọ banyeghị n'ụjọ. Nke ahụ bụ rue afọ a, mgbe ọ rutere ọrụ nke Marcus Moore na oge abụọ nke USA Ngwurugwu.
Dabere na ama ihe nkiri aha, Ngwurugwu Ihe nkiri Igwe onyonyo agbasawo eluigwe na ala dum, ma ọ kachasị n’oge nke abụọ ya ka ọ na-elekwasị anya na ndụ ndị mmadụ na otu esi ewepụ kwa afọ a kpochapụrụ mgbe ezumike “ezumike” kwụsịrị.
Maka akparamagwa nke Luk, onye dibia ER nke jiri oge ya niile na-achọ ime ka onwe ya ka mma ma nyere ndị gbara ya gburugburu aka, nke ahụ pụtara ịnwale ịchọpụta ihe kpatara mmadụ ji gbalịa kpochapụ ya nke na-eduga ya na njem dị egwu n'oge niile nke otu afọ dị ka ọhụụ Ihicha nso.
Onye omeebe ahụ were nkeji ole na ole soro iHorror nwee mkparịta ụka banyere ihe dọtara ya na ụdị okike na ihe agwa dịka Marcus pụtara ya. Ọ bụ njem na-adọrọ mmasị maka ya ma onye omee na mmadụ.
** Ajụjụ ọnụ a nwere ndị na-apụnara mmadụ ihe maka oge nke abụọ Ngwurugwu**
“Etoro m n’ezigbo ụlọ, ebe obibi nke Ndị Kraịst,” ọ kọwara mgbe a jụrụ ya ihe kpatara ụdị ụjọ a ji masị ya. “Thezọ ndị ahụ na-amasị ndị tolitere n'enweghị nna. Azịza mama m bụ, 'Aga m etinye gị na gburugburu ebe ị ga-eri mmụọ gị kama iji nzuzu na-azụ isi gị.' See na-ahụ ọtụtụ na-etolite n’ọgbakọ dị iche iche. Ndị a gwọrọ; ndị na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ. Come nabatara na nke a bụ eziokwu. Ya mere, mgbe m na-ele TV na ihe nkiri ndị na-emenye ụjọ, ọ bụghị akụkụ ka ukwuu nke ihe ndị m hụrụ na nwata. ”
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ zere ụdị ụjọ ọ bụla n'oge ọ malitere ọrụ ya. Ọ bụghị naanị na ọ masịghị ya n'oge ọ bụ nwata dị ka onye na-eme ihe nkiri. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ọ malitere ịjụ etu ọ ga-adị na ụda ga-adị na oghere ahụ.
Kedu ihe ọ nwere na wheel wheel ya nke ọ ga-agbatị site na ịbanye n'ime ụdị ahụ?
“Ndị na-ele egwu dị ka kpakpando, mmadụ. Ha kwesịrị ntụkwasị obi, ”ka o kwuru. Amalitere m iche na ekwesịghị m ịla azụ ịbanye n'ọnọdụ ahụ. Mgbe ole Ngwurugwu bịara bụrụ na ọ bụghị ihe ijuanya nye m dịka ọ dịịrị ndị gbasoro ọrụ m. ”
Ọrụ nke Marcus rịọrọ Luk maka ọtụtụ ihe kpatara na ọ bụ obere ihe kpatara ya.
N'agbanyeghị na ime ihe ike gbara ya gburugburu na iyi egwu ya, Marcus na-eme ihe niile o nwere ike ime ọ bụghị inyefe ya nke ahụ belụsọ ma ọ manyere ya, ma ọbụnadị mgbe ahụ, ọ na-anwa ikwu okwu banyere ọnọdụ ya ma ọ bụrụ na ọ nwere ike.
"Ihe m mụtara banyere Marcus bụ na iwe nwere ike ịkụda gị ma mee ka ị kpuo ìsì ma echere m na Marcus na-alụ ọgụ na ịkọwapụ," Luke kwuru. “Ọ maara na iji bụrụ nna, ịbụ di, ịbụ onye na-agwọ ọrịa, n'ụzọ doro anya bụ isi ihe. Ya onwe m, ihe m masịrị ya, bụ na ọ wupụtara onwe ya n'ihe ọ bụla wee chee na ọ bụrụ na ọ ga-emeli ya, ndị ọzọ nwekwara ike chọọ inyere ha aka ime nke a.
Kinddị nghọta a gbanwere ụzọ agwa ahụ si pụta n'ime ụlọ ederede.
Marcus bi na agbata obi mara mma nke gbara ndị agbata obi ọcha gbara gburugburu gbara gburugburu, bụ ndị, dị ka ọ dị, ọ bụ onye ahụ tinyere ya. Ọ ga-adị mfe ịkọ akụkọ gbasara agbụrụ na itinye uche na eziokwu ahụ bụ na Marcus bụ nwa ojii ndị agbata obi ọcha ya kpọrọ asị naanị n'ihi na ọ bụ oji.
Kama nke ahụ, ndị edemede dere akụkọ dị iche, nye ha mkpali dị iche, ma mechaa kee akụkọ dị iche maka Marcus mgbe ọ bịakwutere ha banyere ihe ha mere.
“Ọ dị iche na mgbe mbụ mụ na ndị dere akwụkwọ malitere ịnọdụ ala,” ka Luk kọwara. "Na agbata obi Marcus, ọ dị mfe ịga maka ihe doro anya, mana echere m na ọ bụ nhọrọ siri ike ịga na ihe ịma aka dị n'ime ya. Enweghị ịkpọasị. Ndiyatke esịt. Ghara ịbụ ihe ndị ọzọ chọrọ ka ị bụrụ. Ọ bụ ya mere m ji chee na ọ na-atọ ụtọ. ”
Oge egwuregwu nke Ngwurugwu ikuku n'abalị ụnyaahụ na USA na oge na-esote anyị, anyị chọrọ ịmata ma Luk ọ ga-achọ ịzọkwu ụkwụ na ụdị a.
“Ee echere m na ihe na-atọ ụtọ bụ [echiche na] ihe a na-adịghị ahụ anya na-emetụta ihe a hụrụ anya,” ka o kwuru. "Ihe m hụrụ n'anya gbasara ụjọ na mmụta sayensị na ọpụrụiche ndị a bụ na o nweghị atụ n'ịchọta ihe anaghị ahụ anya."
Anyị enweghị ike ikwenye karịa ma anyị nwere olile anya ịhụ Derek Luke ka ọ na-eme ihe nkiri na usoro ihe nkiri.
Derek LukeAjụjụ ỌnụNgwurugwuUSA NetworkWaylon Jordan
'Ebe Dị jụụ Nkebi nke Abụọ' Na-enweta Trailer nke Mbụ
'Ihe Josaya Hụrụ' Psychological Horror Film Wraps Production